Nidaamkeena Hubinta Tayada - Ningbo RWWLL VALVE CO., LTD
Waxaan xakameynaa tayada inta lagu jiro dhammaan howlaha wax soo saarka.
Waxaan ogaan karnaa dhibaatada alaabta ceyriinka ah, sida shubida shoogga, dhumucda darbiga aan u qalmin, halabuurka kiimikada iyo wixii la mid ah, oo hubiya inaan lagu khiyaanayn.
Dhinaca kale, waxaan ku hubin karnay saxitaanka qalabka iyadoo loo marayo nidaamkan. Dhinaca kale, waxaan ogaan karnaa qaladka mashiinka sida ugu dhaqsaha badan, si aan ugu guuleysano waqti dheeri ah oo ku saabsan dayactirka iyo dib u habeynta.
Isku uruurinta, Rinjiyeynta iyo xirxirida:
Hawlaha kormeerka kama dambaysta ah waxaa ka mid ah dukumiintiga iyo dib-u-eegista diiwaanka QC, baaritaanka muuqaalka, hubinta cabbirka, baaritaanka cadaadiska, rinjiyeynta iyo hubinta xirmada. Uma baahnid inaad shaqsi ahaan u timaado oo aad dukumiintiyada oo dhan caddeyn ahaan u bixin karto.
Tijaabada khaaska ah:
Marka lagu daro baaritaanka joogtada ah iyo baaritaanka hawada, waxaan sidoo kale sameyn karnaa tijaabooyin qaas ah sida codsiyada macaamiisha, sida baaritaanka PT, tijaabada RT, baaritaanka UT, tijaabada cyogenic, baaritaanka dheecaanka oo hooseeya, tijaabada cadeynta dabka, iyo baaritaanka adkaanta iyo wixii la mid ah .